घर क्लासिक स्टार्स Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य
नोभेम्बर 15, 2017
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल कथालाई सब भन्दा राम्रो भनिन्छ उपनाम; "काका"। हाम्रो Ricardo काका बालबालिकाको कथा प्लस अनर्थ जीवनीको तथ्याङ्कले तपाईंको बचपनको समयदेखि उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, सम्बन्ध जीवन, पारिवारिक जीवन र उनको बारे धेरै थोरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर कमेन्टकाका जीवनीको विचारमा धेरै चिन्ता छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
Ricardo Izecson डोस सैंटोस Leite AKA 'काका' ब्राजीलिया, फेडरल डिजाईन, ब्राजीलिया मा अप्रिल 22 को 1982nd मा जन्म भएको थियो।
उनी आफ्नो आमा, सिमोन डोस सान्टोस (एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षक) र बोस्को इजेकसन परेरा लाइट (एक सेवानिवृत्त नागरिक ईन्जिनियर) मा जन्मिएका थिए।
उनको आर्थिक रूप से सुरक्षित अपबर्निंग थियो जसलाई उनलाई एक स्कूल मा स्कूल र फुटबल मा ध्यान केंद्रित गर्न को लागी अनुमति दिइयो। जब उहाँ सात वर्षको हुनुहुन्थ्यो, काका परिवारको घर फर्किए साओ पाउलो.
धेरै पटक उनको जस्तै, काका फुटबलमा खेल्ने खेलमा भेटियो। तिनको विद्यालयले आफ्नो प्रतिभा खोज्यो र उनलाई स्थानीय युवा क्लबमा राखे "अल्फाविले,"।
काकाले आफ्नो क्लबको अन्तिम प्रतियोगिताको लागि आफ्नो क्लबलाई अर्पण गरे। यसले उसलाई गृहनगर क्लब द्वारा थप स्केआउट गर्न बनायो साओ पाओलो एफसी, जसले उनलाई युवा अकादमीमा एक स्थान प्रदान गर्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
काकाले आफ्नो बचपन प्रिय छोरी क्यारोलिनलाई भेट्टाएपछि उनी 15 थिए र उनी त्यस समयमा 20 थिए।
यो 2002 मा भयो, जबकि उनी अझै स्कूलमा थिए ब्राजिल। तिनीहरू एकअर्कालाई प्रेममा गहिराइमा परे। भित्री दूरी (हजारौं माइलमा) तिनीहरूलाई अलग गर्न सकिएन। कलकलाई खेल्नको लागी दुवैले उनीहरूको गम्भीर सम्बन्ध सुरु गरे एसी मिलान। तिनी टाढा थिए, सेलिकोको काकाको मण्डलीमा सामेल भयो ब्राजिल र पछि पादरी बन्यो, उनको प्रेमीको ईसाई ईश्वरीय विश्वासको सबै धन्यवाद।
साँच्चै, क्यारोलिन धेरै सुन्दर, विश्वासी र एक भक्त ईसाई हुनुहुन्छ। काका प्रसिद्ध रूपमा उद्घोषक हुनुहुन्थ्यो कि तिनीहरू दुवैलाई कुन्नि थिए अघि उनको प्रस्ताव गरे।
उनीहरु डिसेम्बर 23 को 2005rd मा साओ पाओलो मा क्रिस्ट चर्च को लोकप्रिय रीथर्थ मा विवाहित भयो।
काका वेडिंग फोटो
दम्पती दुई छोराछोरी छन्: छोरा लुका सेलिको लाइट (जन्मे 10 जून 2008) र छोरी इसाबेला (जन्मे 23 अप्रिल 2011)। दुबै देखेर उनीहरूको बुबाको नजिक धेरै नजिक छन्।
काका र तिनका बच्चाहरू
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -द तलाक कथा
2015 मा, काका र सेलिकोले उनको तलाकलाई सोशल मिडिया मार्फत घोषणा गरे। उनको शब्दहरुमा ..."हामी जनता बनाउन चाहन्छौ कि, नौ वर्ष सँगसँगै, हामी सामान्यतया तलाक गर्न सहमत छौं। हाम्रो विवाहले हामीलाई दुई सुन्दर छोराछोरी दिएको छ जसलाई हामी माया गर्छौं। महत्त्वपूर्णको प्रकाशमा सम्बन्धहरू, हामी जारी रहनेछौं, आदर, कृतज्ञता, र एकअर्काको प्रशंसा पारस्परिक रूपमा रहन्छ। हामी तपाईंको सहानुभूति र बुझ्नको लागि सोध्दछौ कि परिवर्तनको पछाडि हाम्रो गोपनीयताको रक्षा गर्न। "
उनको पूर्व पत्नी सेलिकोले पनि खुलासा गरे ... "जब एक व्यक्ति धोका दिन्छ, यो एक चिन्ह हो कि उनको पत्नी असफल भयो।" उनको शब्दले काकाको प्रशंसकहरुलाई एक सुराग दिईयो किनकी उनको तलाक को कारण बन्यो र किन उनि तलाक दिए।
उनको तलाकको क्यारोलिनको धारणा
24 डिसेम्बर 2016 मा, काकाले पुष्टि गरेको छ कि उनी ब्राजीलियन मोडेल क्यारोलिना डायस डेटिङ गर्दै छन् एक इन्स्टाग्राममा XNumXmillion अनुयायीहरूलाई।
प्रमाणहरू किका मा सारियो
जोडीले साओ पाउलोमा लुकास मोराको विवाहमा भाग लिइन्।
साथै म्याग्दीको अन्त्यमा म्यासेजको अन्त्य पछि, क्यारोलिन सेलिको आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छ कि उनी अहिले ब्राजीलियन व्यवसायी एडवर्डारो स्कर्पासँग सम्बन्धमा छन्। जब उनले आफ्नो पूर्व-पत्नीको फोटो र एक जना शत्रुको फोटो देखेका थिए काकालाई रोमाञ्चक लाग्यो। आइडोर्डो आफ्नो नयाँ मायाको राम्रो हेरचाह लाग्न लाग्दछ।
सायद कैरोलीन सेलोको चलेको थियो
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
फेथर: काकाको पिता, बोस्को इजेकसन पेरारा लाइट एक मध्यस्थ परिवारको पृष्ठभूमिको एक सेवानिवृत्त नागरिक ईन्जिनियर हो। उनले यकीन गरे कि उनको दुई छोराहरु (काका र डिजाओ) उचित उत्थान पाए। तिनीहरू गरिबीबाट उठेर टाढा थिए। उनले उनलाई सही क्यारियर र अवसर पाएका छन र आफ्नो क्यारियर सपनालाई जीवित बनाउँथे। तल Bosco Izecson Pereira Leite र उनको पहिलो छोरा, सानो काका हो।
Bosco Izecson Pereira Leite र सानो काका
मातृभाषा: काकाको मासु सिमोन डोस सैंटोस एक सेवानिवृत्त प्राथमिक विद्यालय अध्यापक हो जसले उनको, काका र बाकी परिवारका बीच सकारात्मक सम्बन्ध निर्माण गरेको छ। एक प्राथमिक स्कूल शिक्षकले उनको पारिवारिकी गतिशीलताको राम्रो बुझाइ गरे। सिको डोन सान्टोस भगवानका कोकाको नजिकता हो। दुवै तस्वीर तल देखेर धेरै नजिक छन्।
काका र माम- सिमोन डोस सैंटोस
भाइरस: Rodrigo Manuel Izecson डोस सैंटोस लाइट (जन्मे 14 अक्टोबर 1985), डेजोको रूपमा चिनिन्छ ब्राजिलियन सेवानिवृत्त व्यावसायिक फुटबलर र काकाको मात्र भाइ। उनले आफ्नो करियरको समयमा केन्द्रीय डिफेंडरको रूपमा खेले।
As ब्लेचर रिपोर्ट यो राख्छ, डिगाउ विश्वको शीर्ष-10 फुटबलिंग भाइहरूको सूचीमा छ जसले यसलाई आफ्नो क्यारियरमा बनाएन। डेजुका लागि खेले एसी मिलान एक वर्षको लागि अमेरिकी महाद्वीपमा फर्किन अघि आफ्नो क्यारियर जारी गर्न असफल भयो।
टिल डेटिङ, उनी सबै भन्दा अचम्मको खेलाडिको रूपमा मानिन्छ जसलाई सधै सेरि ए पि पिचमा राखिन्छ। केही प्रशंसकहरू भन्छन् कि उनी प्रत्यक्ष सीधा (एंटोनम) हो काका सम्भव छ। खुसीसाथ, डेजुले आफ्नो सम्पूर्ण क्यारियरमा मात्र गोल गर्दै गोल गरे। उनले 38 को शुरुआती उमेर मा सेवानिवृत्त भएको देखे कि फुटबल उनको बुला नहीं था।
आफ्नो कैरियरमा हराएको के भयो उसको प्रेमको जीवनमा प्राप्त भयो। उनी खुसीसाथ विवाह गरेर वास्तुकार रिबेका सबबिनोसँग विवाह गर्छन्। काका विवाहको गोठाला थिए।
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -स्विमिंग पूल दुर्घटना
18 को उमेर मा, काकाले एक स्विमिंग पूल दुर्घटनाको परिणामस्वरूप क्यारियर-धमकी र सम्भवतः पक्षाघात-अपशिष्ट स्पिड फ्र्रेक्चरको सामना गर्यो।
सौभाग्य देखि, उनले पूर्ण रिकवरी गरे। उहाँले परमेश्वरलाई आफ्नो पुन: प्राप्तिको गुणस्तर र आफ्नो चर्चमा आफ्नो आय शीर्षक दिए।
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -उपनामको उत्पत्ति
उनको सानो भाइ Rodrigo (सर्वश्रेष्ठ डिजाउ को रूप मा जाना) र चचेरे भाई Eduardo Delani पनि पेशेवर फुटबलरहरु हो।
Digão उसलाई भनिन्छ "Caca" उच्चारण गर्न असक्षम कारण "Ricardo" जब तिनीहरू जवान थिए। उच्चारणको कमीले अन्तमा नामको विकास गर्यो 'काका '. नाम 'काका' कुनै पोर्चुगल अनुवाद छैन।
त तिनीहरू बालबालिका हुन् जब काका र तिनका भाइ भाइको फोटो हो।
लिटिल काका र डेजो
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -उहाँको विश्वास
काका एक ईश्वरीय ईसाईल ईसाइली ईसाई हो जुन ख्रीष्ट चर्चमा साओ पाउलो-आधारित रीरेन्थको सक्रिय सदस्य हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ 12 उमेरमा धर्ममा व्यस्त हुनुभयो: "मैले सिकें कि यो विश्वास हो कि निर्णय हुन्छ कि केहि हुनेछ वा छैन।" काका भन्छिन्।
उहाँ सामान्यतया आफ्नो जर्सी हटाउन जान्नुहुन्छ "म येशु संग सम्बन्धित छु टी-शर्ट। काका पनि अन्तिम सीट म्याच पछि प्रार्थना क्षणमा संलग्न रह्यो। यो ब्राजिलको 2002 विश्व कप पछि गरे, मिलान 2004 Scudetto र 2007 चैंपियंस लीग विजयी।
ब्राजिलको 4-1 पछि अर्जेन्टिनामाथि जित्ने म्याच म्याचको उत्सवको समयमा 2005 कन्फिगरेसन कपहरू अन्तिम, उनले र तिनका थुप्रै साथीहरू पढ्ने टी-शर्टहरू लगाए "येशूले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ" विभिन्न भाषाहरूमा।
2007 मा फीफा विश्व फुटबलर को वर्ष पुरस्कार प्राप्त गर्दा, उनले भन्यो जब उनि युवा थिए त्यो सिर्फ साओ पाउलो को लागि एक पेशेवर खेलाडी हुनु पर्छ र एक खेल को लागि खेलना ब्राजिल राष्ट्रिय टोली, तर त्यो "परमेश्वरले [उहाँलाई] उहाँले उहाँले सोधे भन्दा बढी दिनुभयो।"
सम्मको मिति, काकाको मनपर्ने संगीत शैली सुसमाचार हो र उनको मनपर्ने किताब पनि बाइबल बनी रहेको छ। को संग एक साक्षात्कार मा ब्राजिलियन टेलिभिजन हे ग्लोबो, काकाले सेवानिवृत्ति पछि एक ईजीलियन पादरी हुने इच्छा व्यक्त गरे।
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -के उहाँ सम्झनुभएको छ
उनको रक्षा-विभाजित पासका लागि।
चोटहरूको लागि उहाँले रियल म्याड्रिडको सामना गर्नु भयो।
द्रुत, बलियो, चिसो र कडा परिश्रमको लागि।
उत्कृष्ट गति, राम्रो खुट्टा र उत्कृष्ट ब्यालेन्सको साथ रचनात्मक टोली खेलाडीको लागि।
अघिल्लो रक्षकहरु लाई धोखा देने को क्षमता को लागि।
काउन्टरका नेताहरूको नेतृत्व र मौकाहरू सिर्जना गर्न।
एक सटीक सजाय टेकरको लागि।
गहिरो भूमिका मिडफील्ड प्ले निर्माताको लागि।
25 सक्छ, 2019
डिसेम्बर 31, 2018